Momba anay - KAIRDA GROUP CORPORATION
KAIRDA GROUP CORPORATIONdia naorina tamin'ny Desambra 2010, famokarana lohan'ny NDT any Shina. nahavita tamim-pahombiazana ny fahatokisana ny tsena tamin'ny fanolorana vokatra tsara sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra.
Ny vokatra lehibe dia ny Surester Roughness Tester, ny haben'ny ultrasonia, ny rindrina matevina amin'ny rindrina, ny tester Hardness Portable, ny detector ultrasonic flaw sns.
Mandritra izany fotoana izany, izahay koa dia miara-miasa amin'ireo mpanamboatra malaza sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra fitaovam-pitsapana hafa mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifanay.
Ny vokatra KAIRDA dia be mpampiasa amin'ny fanandramana fitaovana welding, robot ary indostria avo lenta.
Mihatra amin'ny sehatry ny indostrian'ny Steel orinasa, orinasa Miaramila, milina solika, faritra misy fiara, koveta ary sambo fanerena, indostria simika, famokarana herinaratra, famokarana fiara, aerospace, indostrian'ny fitaovana milina, indostrian'ny sakafo, andrimpanjakana siantifika, sekoly fianarana, fanadihadiana & injeniera sivily, sns.
Miaraka amin'ny tombony azo amin'ny fampisehoana sy ny vidin'ny fifaninanana, ny vokatra KAIRDA dia manana tsena mihoatra ny 80% any Shina. ary manitatra ny asa eran'izao tontolo izao: Japon, Korea, Singapore, India, Filipina, Moyen Orient, Eoropa, Amerika atsimo, Afrika sy ny sisa.
Amin'ny maha mpanamboatra fanandramana NDT matihanina, ny ekipanay dia afaka manome fanohanana fampiroboroboana bebe kokoa arakaraka ny tsena eo an-toerana miaraka amin'ny traikefa anananay mba hanampiana anao hanao famakafakana filana matihanina sy hiaro ny tsena, hamolavola vokatra vaovao hatrany hamoronana fotoana bebe kokoa amin'ny fiaraha-miasa maharitra. Mandritra izany fotoana izany, hanohana anao izahay serivisy aorinan'ny varotra mahery hamahana olana. ny vokatray manokana miaraka amin'ny fiantohana hatramin'ny roa taona sy ny fikojakojana maharitra. Hanome fiofanana sy kojakoja fikojakojana izahay miaraka amin'ny vidiny mirary. KAIRDA dia manolo-tena amin'ny famoronana ny sanda ho an'ny indostria NDT manerantany ho adidiny manokana, tsy mendrika hanome vokatra tonga lafatra amin'ny tsena, manome serivisy amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, fitantanana amin-kitsimpo hamorona marika malaza.